Health/wellness – Chakra Jwala
Articles or New findings about health
रक्तदानसँग जोडिएका केहि महत्वपूर्ण तथ्यहरु
Posted on 8 Jan 2018 8 Jan 2018 by Chakra Bhandari
अम्बाको पात १० रोगको रामबाण औषिधी: जानिराखौं
Posted on 31 Dec 2017 31 Dec 2017 by Chakra Bhandari
धेरैजसोलाई अम्बा एकदम मनपर्छ । अम्बाको जुस बनाई पनि पिउने गरिन्छ । तर के तपाइँलाई थाहा छ ? हामीले खाने अम्बाको पातले प्राकृतिक औषधिको रुपमा काम गर्दछ । यो पातले तौल घटाउनुका साथै तीव्रज्वरो , झाडापखाला ,आउँ जस्ता रोगहरुसँग लड्नको लागि मद्धत गर्दछ । यसैगरी निम्न १० रोगहरुको उपचारको लागि अम्बाको पातले औषधिको रुपमा काम गर्दछ ।
अम्बाको पातका फाइदाहरु यसप्रकारका छन्:
१) मधुमेह रोगको लागि लाभदायक: जापानको याकुल्टा सेन्ट्रल इन्ष्टिच्युटमा भएको एक अनुसन्धानबाट पत्ता लगाइएको छ की अम्बाको पातमा ग्लुकोज कम गर्ने क्षमता हुन्छ । यसले शरीरको माल्टोज र सुक्रोजको मात्रालाई घटाउँछ । १२ हप्तासम्म अम्बाको पातलाई पानीमा उमालेर पिउनुहोस् यसले शरीरको चीनीको मात्रालाई कम गराउँछ ।
२) कोलेस्ट्रोल कम गर्छ: ३ महिनासम्म अम्बाको पातको प्रयोगले राम्रो कोलेस्ट्रोलमा प्रभाव नगरिकनै नराम्रो कोलेस्ट्रोललाई हटाउन मद्धत गर्दछ । यसको साथै अम्बाको पातले कलेजोलाई पनि राम्रो प्रभाव पार्दछ ।
३) आउँ र झाडापखालको लागि: अम्बाको पातले आउँ र झाडापखालाको लागि प्राकृतिक औषधिको रुपमा काम गर्दछ । झाडापखालाको औषधिको लागि ३० ग्राम अम्बाको पातलाई एक लिटर पानीमा एक वा दुई मुठ्ठी चामलको पीठोसँग उमाल्नुुहोस् । यस मिश्रणलाई दिनमा दुईचोटि पिउनुहोस् । आउँको उपचारको लागि अम्बाको पातलाई २० मिनेटसम्म ९० डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा उमाल्नुहोस् । त्यसपछि पानीलाई छानेर पानी चिसो भएपछि पिउनुहोस् ।
४) पाचनप्रणालीलाई बलियो बनाउँछ: अम्बाको पातमा पेटको समस्या हटाउने गुण हुन्छ । यस्ले पेटको हानिकारक ब्याक्टेरियालाइ हटाउँछ । र आंद्रालाई सफा बनाई राख्न मद्धत गर्दछ । विषादि खाना , वान्ता हुने स्थितिमा पनि अम्बाको पात लाभदायक हुन्छ । पेट दुख्ने समस्यालाई हटाउनको लागि ८–१० वटा अम्बाको पातलाई १.५ लीटर पानीमा उमालेर पिउनाले आराम मिल्दछ ।
५) तौल घटाउन मद्धत गर्छ ः अम्बाको पातले कम्प्लेक्स स्टार्चलाई चीनीमा बदल्न दिदैंन । जस्को फलस्वरुप शरीरमा अनावश्यक क्यालोरी बन्न नदिई तौल घटाउन सहयोग गर्दछ ।
६) स्वासनलिसम्बन्धि उपचारमा लाभदायक ः अम्बाको पातले फोक्साको बाटो राम्रो बनाई खोकी कम गर्छ । र स्वासनलिसम्बन्धि समस्याबाट आराम दिलाउँछ ।
७) दाँतको र गिजाको लागि ः दाँत दुख्ने , गिजा सुनिने जस्ता अवस्थामा पनि अम्बाको पातको प्रयोग लाभदायक हुन्छ । अम्बाको पातमा सुनेको कम गर्ने गुण हुन्छ । अम्बाको पातबाट बनेको पेस्टले सधैं ब्रश गर्नाले दाँतलाई धेरै फाईदा पुर्याउँछ ।
८) तीब्र ज्वरोको लागि पनि लाभदायक ः अम्बाको पातमा ब्लड प्लेटलेट्स बढाउने शक्ति हुन्छ । जस्को कारणले गर्दा तीब्रज्वरोको लागि अम्बाको पात धेरै फाइदाजनक हुन्छ । तीब्रज्वरोको लागि अम्बाको ८–९ पातलाई ५ कप पानीमा राखेर उमाल्नुहोस् । पानी घटेर ३ कप बाँकी भएपछि निकाल्नुहोस् । र दिनमा ३ पटकसम्म रोगीलाई पिलाउनुहोस् ।
९) प्रोस्टेट क्यान्सरको लागि फाइदाजनक ः अम्बाको पातले प्रोस्टेट क्यान्सरलाई रोक्नको लागि मद्धत गर्दछ
१०) शुक्राणु निर्माण ः अम्बाको पातको प्रयोगले वीर्यमा शुक्राणुको निर्माण छिटो हुुन्छ ।
अमलाको जुस सेवन गर्दा कल्पना समेत नगरेका फाइदा
अमलामा भिटामिन सी पर्याप्तमा मात्रामा हुन्छ । यसको प्रयोग तपाईलाई निकै लाभदायक हुन्छ । अमलामा सुन्तलामा भन्दा २० गुणा बढी भिटामिन सी पाइन्छ । यसमा फाइबर, प्रोटिनका साथै अन्य भिटामिनहरु पनि हुन्छ ।
आयुर्वेद विज्ञानका अनुसार अमलाको जुस पिउनाले उमेर बढाउँछ । यसको रसमा मह मिसाएर पिएमा अस्थमाको असर कम हुनेछ । यसले रगतमा शुद्दपना ल्याउँछ । हामी तपाईलाई अमलाको जुस सेवनको फाइदाबारे जानकारी दिन्छौं ।
१. अमलाको जुस सेवनले तपाईको मुटुलाई स्वस्थ बनाउँछ त्यसका साथै यसको प्रयोगले रक्तचापलाई समेत सन्तुलनमा राख्ने काम गर्छ ।
२. यसले तपाईको पाचन प्रणालीलाई तन्दुरुस्त बनाउँछ । यसले तपाईको बजन घटाउन पनि महत्वपुर्ण भूमिका खेल्दछ ।
३. अमलाको जुसमा मह मिसाएर पिएमा डण्डिफोर समेत न्यूनिकरण गर्दछ ।
४. दिनमा दुई पटक अमलाको जुसलाई केराको साथमा खाएमा महिनावारी गडबडीको समस्या कम गराउँदछ ।
५. अमलाको जुसलाई बेसार र महको साथ सेवन गरेमा मधुमेहको बिरामीलाई फाइदा पुग्छ ।
आफ्नै जानकारीको लागि बिगुलन्युजबाट साभार
यी हुन् शरिरमा क्यान्सर रोग भए/नभएको पत्ता लगाउने ७ तरिका
Posted on 13 Feb 2017 13 Feb 2017 by Chakra Bhandari
बरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा.राजेन्द्र प्रसाद बरालले नेपालमा ८० प्रतिशत क्यान्सरका बिरामी अन्तिम अवस्थामा मात्रै अस्पताल पुग्ने गरेको बताए ।
क्यान्सर अर्थात अर्बुद रोगबारे शनिबार लियो क्लब अफ काठमाडौं जोरपाटीद्वारा आयोजित सचेतनामुलक कार्यक्रमलाइ सम्वोधन गर्दै डा. बरालले क्यान्सर जटील प्रकृतीको रोग भएपनि समयमै उपचार हुन सके सजिलै निको पार्न सकिने जानकारी दिए ।
उनले नेपालमा पुरुषहरुमा सबै भन्दा बढी फोक्सोको क्यान्सर र महिलाहरुमा सबै भन्दा बढी पाठेघरको मुखको क्यान्सरका रोगीहरु भएको बताए ।
सामान्यतया शरीरकाका विभिन्न अंगहरुमा कोषीकाको अनियन्त्रीतवृद्धी हुनुनै क्यान्सर हुनु हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा ८२ लाख व्यक्तीको मृत्यु क्यान्सर रोगबाट मृत्यु हुने गर्दछ भने २ लाख ७० हजार महिलाहरुको मृत्यु पाठेघरको मुखको क्यान्सरका कारणले हुने गर्दछ । क्यान्सर जुनसुकै उमेरका व्यक्तीमा जुनसुकै भागमा पनि हुने गर्दछ । विश्वव्यापी रुपमा १३ प्रतिशत मृत्यु क्यान्सरका कारणले हुने गरेको पाइन्छ ।
१)निको नहुने खोकी लागेमा अथवा घोक्रो स्वर भएमा
२) छालामा भएको कोठीको रङ्ग र आकार परिवर्तन भएमा
३)शरीरको भाग अत्याधिक दुख्न थालेमा वा शरीरमा गिर्खा आएमा
४)उपचार गर्दा पनि शरिरमा लागेको घाउ निको नभएमा वा बल्झीएमा
५) शरिरबाट असाधारण रक्तस्राव वा पिप आएमा
६)दिशा वा पिशावमा गर्ने समयमा फरक आएमा वा गाह्रो भएमा अथाव दिशा पिशाब गर्दा रगत देखिएमा